Creative မီးဖိုချောင်နှင့်စားပွဲခုံစည်းရုံးသူအမြောက်အမြားသိုလှောင်ခန်း - အခမဲ့ရေယာဉ်နှင့်အခွန်မဆောင်ပါ WoopShop®
အရွယ် 22x 15.5x3.5cm 22x11x3.5cm
အရောင် အဖြူ မီးခိုးရောင်
မှစ. သင်္ဘောများ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပြင်သစ် ရုရှားပြည်ထောင်စု စပိန် တရုတ်နိုင်ငံ
22x 15.5x3.5cm / အဖြူ / အမေရိကန် 22x 15.5x3.5cm / အဖြူ / ပြင်သစ် 22x 15.5x3.5cm / white / Russian Federation 22x 15.5x3.5cm / စပိန် / အဖြူ 22x 15.5x3.5cm / မီးခိုးရောင် / ပြင်သစ် 22x 15.5x3.5cm / အဖြူ / တရုတ် 22x 15.5x3.5cm / မီးခိုးရောင် / စပိန် 22x 15.5x3.5cm / မီးခိုးရောင် / အမေရိကန် 22x 15.5x3.5cm / မီးခိုးရောင် / တရုတ် 22x 15.5x3.5cm / မီးခိုးရောင် / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း 22x11x3.5cm / အဖြူ / အမေရိကန် 22x11x3.5cm / အဖြူ / ပြင်သစ် 22x11x3.5cm / အဖြူ / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း 22x11x3.5cm / အဖြူ / စပိန် 22x11x3.5cm / မီးခိုးရောင် / ပြင်သစ် 22x11x3.5cm / အဖြူ / တရုတ် 22x11x3.5cm / မီးခိုးရောင် / စပိန် 22x11x3.5cm / မီးခိုးရောင် / အမေရိကန် 22x11x3.5cm / မီးခိုးရောင် / တရုတ် 22x11x3.5cm / မီးခိုးရောင် / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း
Creative မီးဖိုချောင်နှင့်စားပွဲတင်စီစဉ်သူအမြောက်အမြားသိုလှောင်ရေးသေတ္တာ - ၂၂x ၁၅.၅x ၃.၅ စင်တီမီတာ / အဖြူ၊ အမေရိကန် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Feature: Eco-Friendly၊ ခေါက်ထားခြင်း
စွမ်းဆောင်ရည် - အခြား
အရောင်: အဖြူ, မီးခိုးရောင်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဒေါက်တာawer သိုလှောင်မှု box ကို
အရွယ်အစား: 22 * ​​15.5 * 3.5cm (ကြီးမားသောအရွယ်အစား), 22 * ​​11 * 3.5cm (သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား)
လျှောက်လွှာ - စားပွဲခုံ၊ ရုံး
ခြံများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ သံလိုက်အိမ်မြှောင်များ၊ စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါများ၊ ကတ်ကြေးများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်အခြားအရာများ
အံဆွဲသည်ဖုန်ထူ။ ဖုန်မှုန့်များ၊ အံဆွဲချောမွေ့စွာဆွဲ။ တံဆိပ်ခတ်ကောင်းသည်၊ သေတ္တာထဲတွင်ဖုန်များစုပုံနေခြင်းကိုရှောင်ရှားသည်
ABS ပစ္စည်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများ၊ တာရှည်ခံခြင်းနှင့်တာရှည်ခံခြင်း
လက်ဖြင့်စက္ကန့် 30 ကြာကိုင်ထားပါ
1 * သိုလှောင်မှု box ကို
13days အလျင်အမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းသည် woopshop ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ငါထုတ်ကုန်အဖြစ်ဆိုင်အကြံပြုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ကုန်ပစ္စည်းများ naruszony မဟုတ်တပြင်လုံးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ငါပျော်ရွှင်မိပါတယ်
အဆင်ပြေသောသေတ္တာများ၊ သင်နှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည့်အရာများအား screw နှစ်ခုနှင့်နှစ်ဖက်ပါကလစ်များနှင့်တွဲနိုင်သည်။ အလွန်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့
ပက်စထရူကူတွင်ထုပ်ပိုးထားသောသေတ္တာများသည်ကိယက်ဗ်တစ်ခုလုံးသို့ရောက်လာသည်။ အကွက်ကို ၅၂ ရက်လုံးလုံးခြေရာခံခဲ့သည်။ တရုတ်၊ ကာဇက်စတန်၊ ရုရှား၊ ဘီလာရုစ်၊